Orinasa mpanamboatra ravina sy foza - mpamatsy sy orinasa famokarana foza sy foza any Shina
Fitaovana fanjonoana vita amin'ny jono vita amin'ny jono
2.Lure Type: Minnow - Ny hazandrano Minnow dia toy ny trondro ary entina mamakivaky ny rano izy ireo amin'izay ahafahany mihetsika amin'ny fomba samihafa noho ny tsy fandriam-pahalemana noho ny bib eo alohan'ny lohany. Bait mafy
Bionic Bait Glow milomano baomba malefaka milomano manjono malefaka Squid Jig Shrimp
2.Lure Type: Baza malemy / Shrimp Soft Bait - Ny paompy plastika malefaka dia misy karazan-jaza samihafa, ampiasaina amin'ny jono baskety.
Fitaovam-piaramanidina malefaka sy marefo mamintina mason-jaza manjelanjelatra
Lure malefaka 7CM / 9CM karazana baomba milomano makamba, karazan-jono marimarina
Ny jono manjono malefaka mavesatra fonosana / makamba
1. Fomba fanjonoana: Fanjonoana trondro sy fanjonoana an-dranomasina Fanjonoana jono ankapobeny Fanjonoana karpa Fanjonoana rano mangatsiaka Jigging Fanjonoana manjono Baing Casting
2.Lure Type: Jerkbaits Soft Bait - Ny savony plastika malefaka dia misy karazan-jaza maro karazana, fampiasa amin'ny jono bask. Craws / Shrimp
Fanjonoana maimbo malefaka
Kitapo malemy malemy
1.Materialy: silikika pad
2. Halavana: 4-45cm
3. Colours: loko an-jatony no hita.
4. fonosana: kitapo OPP. Ekena ny fangatahan'ny mpanjifa.
5.Function: modely samihafa mety amin'ny jono rano madio sy jono rano asin
6. fofona trondro mahaliana sy hetsika milomano mivantana. Mahazoa trondro bebe kokoa.
7.Ny tsara indrindra amin'ny jono trolling.
8. Volavola namboarina, tongasoa manokana ny marika manokana.
Famokarana makamba malefaka amin'ny vidin'ny orinasa
Ny paty malefaka no tian'ny bass. Rehefa avy nilentika tany ambanin'ny rano izy dia nihovotrovotra kely ny tampony sy ny fanambanin'ny tsorakazo, ka nahatonga ny savony hitsambikina sy hidina hisintonana ireo trondro kendrena. Ny fitsambikinana makamba kely ety ambonin'ny tany dia mety hisarika ny tanjon'ny rano ihany koa. Fa ny fotoana mihozongozona dia tsy tokony ho lava loatra, tokony hisy ny fahatsapana gadona, io fahatsapana io dia mila raisina amin'ny ady tena izy.
Famokarana plastika malefaka vita amin'ny volom-borona
Baza-jaza artifisialy Baure 3D Simulate Soft Fish Bait
• mamorona hetsika milomano toy ny fiainana ao anaty rano izy ireo!
• hetsika milentika malefaka sy haingana
• loko mamirapiratra hisarihana trondro lehibe!
• Maso bebe kokoa 3D Holographic maso mahatonga azy ireo hitovy amin'ny fiainana sy mahery setra.
• Mety amin'ny fisamborana karazan-dranomasina sy rano velona
• Ny safidin'ny Anglers tsara indrindra, fitaovana mahatratra azy io izy io
Baza foza vita amin'ny plastika malemy tsy azo vaky
Ny vatana malemy 1.3D dia miovaova, mahatonga ny trondro mpiremby hampivadika azy.
2.Ny vatana anatiny dia mampiasa taratasy tainbow reticular izay taratra hazavana tsara, manintona avy hatrany ny trondro.
3. Vatana sahona, hetsika milomano mazava.
4.Savao malefaka, matevina ary maharitra; maharitra amina tratra maro
5. Sariaka amin'ny tontolo iainana, bio tsy azo ovaina, tsy misy poizina
Baza plastika malefaka
Fiainana Bait Bionic Glow Crab Hook Manandramana Fitaovam-pitondrana jono malefaka velona
Loko marobe (ekeo ny fanao)